Taliyayaasha qeybaha ee ciidanka xoogga oo billaabay in ay raadiyaan ciidamo boqolaal ah oo ka maqan xarumihii lagu ogaa. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Taliyayaasha qeybaha ee ciidanka xoogga oo billaabay in ay raadiyaan ciidamo boqolaal...
Taliyayaasha qeybaha ee ciidanka xoogga oo billaabay in ay raadiyaan ciidamo boqolaal ah oo ka maqan xarumihii lagu ogaa.
Taliyayaasha qeybaha iyo kuwa ka hooseeya ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo madaxda wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa billaabay in ay raadiyaan ciidamo boqolaal ah oo ka maqan xarumihii lagu ogaa, kuwaas oo isugu jira ciidan fasax ku maqan iyo kuwa iska soo baxay.
Warar ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in gacanada laga baafiyay askar maqan iyo saraakiil ciidanba. Sidoo kale waxaa la sheegay in qaar kamid ah ciidamada iyo saraakiisha loola xiriiray si toos ah.
Previous articleMadaxweyaha Somaliland oo xafiiskiisa ku qaabiley wefdi ka socday dalka Qatar uu hoggaaminayo Ergayga gaarka ah
Next articleWasaaradda arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi eedayn u jeediyay madaxweyne Joe Biden
Jaaliyadda Muslimiinta Canada ee ku nool gobolka Quebec ayaa mar kale racfaan ka qaadatay go'aan ay maxkamadi ku macnuucday in gabdhaha xijaaban ay dhigaan...
Markab Israail leedahay ee Gacanka Omaan Badda lagu qarxiyey oo Gaaray...